Amanani e-Adderall: Yimalini i-Adderall ngaphandle komshwalense? - Imininingwane Yezidakamizwa | Septhemba 2021
Inkampani Ezempilo Umphakathi Inkampani, The Checkout Umphakathi, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa Cindezela Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Izidakamizwa Vs. Umngani Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izindaba Ukuphuma Umphakathi, Inkampani Izindaba, Wellness
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa >> Yimalini i-Adderall ngaphandle komshwalense?
Yimalini i-Adderall ngaphandle komshwalense?
Zonke izintengo zemithi ziyehluka ngokuya ngezici eziningi, njengokuthi ngabe yigama lomkhiqizo noma umuthi ojwayelekile, ukumbozwa komshuwalense, namafomula ezidakamizwa. I-Adderall ayihlukile. Labo abanikezwe lo muthi we-ADHD bavame ukubuza: Kubiza malini u-Adderall? Thola ukuthi ungayonga kanjani imali ku-Adderall ngaphandle komshwalense kulo mhlahlandlela.
I-Adderall (amakhuphoni e-Adderall)umuthi ohlanganisiwe oqukethe i-amphetamine ne-dextroamphetamine. I-Adderall (Yini i-Adderall?) Yigama lomkhiqizo, kodwa futhi liyatholakala ngendlela ejwayelekile. Iziguli kufanele zibe nemithi kadokotela yokuthenga i-Adderall noma i-generic yayo.
Lesi sikhuthazi samukelwa yi Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa E-United States (I-FDA) yokwelapha ukunakekelwa kokushoda kwengqondo (ADHD) kanye ne-narcolepsy. Kungaba njalo ukwakha umkhuba futhi kwesinye isikhathi isetshenziselwa ukuzijabulisa, ngakho-ke yinto elawulwa kakhulu.
I-Adderall ngumuthi owandisa i-dopamine, kuchaza UTimothy Legg , I-PsyD, ilungu le-faculty yohlelo lwe-Walden University's Master of Science in Nursing (MSN), elineminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni linikeza iziguli ukunakekelwa kwezempilo yengqondo. Yenza okufanayo nge-neurotransmitter norepinephrine, okuholela ekwandisweni okuphelele kwemiphumela ye-dopamine ne-norepinephrine. Ngokwandisa isenzo se-dopamine ne-norepinephrine ezindaweni ezithile zobuchopho, ukunakwa, ukugxila, ukusebenza okuphezulu, nokuvuka kuyathuthukiswa.
OKUSHIWO: Imithi yokwelashwa ye-ADHD
I-Adderall itholakala kumathebulethi akhishwa ngokushesha (i-IR) noma ukwakhiwa kokukhishwa okwandisiwe (XR).
Ukusetshenziswa okubekiwe Umzila wokuphatha Isilinganiso sokuqala
I-ADHD kubantu abadala Ithebhulethi yomlomo noma i-capsule Ithebhulethi engu-5 mg kanye kuya kabili ngosuku (Adderall)
20 mg capsule nsuku zonke (Adderall XR)
I-narcolepsy kubantu abadala Ithebhulethi yomlomo Ithebhulethi elingu-10 mg nsuku zonke ekuseni
I-ADHD ezinganeni ezineminyaka engu-3-17 Ithebhulethi yomlomo Ithebhulethi engu-2.5 mg nsuku zonke ekuseni
Odokotela bangakhuphula imithamo ye-Adderall ngo-5 kuye ku-10 mg engezelelwe masonto onke baze bathole isilinganiso esifanele. Izilinganiso azivamile ukudlula ama-40 mg ngosuku. Ukulinganisa kuyahluka ngesiguli.
lisebenza kahle kangakanani idepho control control birth
Imiphumela emibi ye-Adderall
Akunandaba noma ngabe umuntu othile uthatha i-Adderall ye-ADHD noma i-narcolepsy, kunengozi yokuthola imiphumela emibi. Eminye imiphumela emibi ye-Adderall ihlanganisa:
Ukushesha, ukushaya ngamandla, noma ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile
Ukwanda komfutho wegazi
Izinkinga zesisu (ezifana nohudo, ukuqunjelwa, isicanucanu)
Zama ikhadi lesaphulelo somuthi we-SingleCare
Kubiza malini u-Adderall ngaphandle komshwalense?
Izindleko ze-Adderall zincike ezintweni eziningana ezifana nomthamo, ukwakheka kwezidakamizwa (i-Adderall XR noma i-IR), okujwayelekile noma igama lomkhiqizo, nokuthi ngabe isiguli sinomshuwalense wezempilo yini.
I-Adderall ngaphandle kwezindleko zomshuwalense cishe $ 8 kuthebhulethi ngayinye , noma u- $ 237.30 ngenyanga ngomthamo wokuqala we-5 mg tablet kanye ngosuku. Ngenhlanhla, imishanguzo ejwayelekile iyabiza kakhulu kunabalingani bamagama abo. Inani elifanayo le-Adderall ejwayelekile libiza ngaphansi kuka- $ 25 ngo-a Ikhuphoni le-SingleCare .
Njengoba kunikezwe ukwehluka kwezindleko ze-Adderall, iziguli kufanele zikhulume nomhlinzeki wazo wezokunakekelwa kwempilo mayelana nezinketho zazo, ikakhulukazi uma zingavikelekile noma zine-copay yomshuwalense ephezulu. Odokotela bangancoma enye indlela eshibhile kune-Adderall, efana ne-generic URitalin noma okujwayelekile I-Focalin . Yize izindleko zale mithi zisahluka, abasebenzisi be-SingleCare bangakhokha u- $ 16- $ 20 ngama-30, 5 mg tablet.
OKUSHIWO: I-Vyvanse vs. Adderall
Ungayithola kanjani i-Adderall ngaphandle komshwalense
Kunezindlela ezimbalwa abantu abangonga ngazo ku-Adderall noma imishanguzo efana ne-ADHD. Nazi izinketho ezimbalwa zokunciphisa izindleko ze-Adderall.
ukuhlela b kufanele uthathe isikhathi esingakanani
1. Iya ejwayelekile
Amakhasimende ekhemisi angaqinisekisiwe angonga amakhulu amadola ngokukhetha i-Adderall ejwayelekile. Okokuqala, buza usokhemisi ukuthi ngabe i-amphetamine-dextroamphetamine iyatholakala yini.
2. Sebenzisa ikhadi lokonga i-SingleCare
Amakhasimende ekhemisi angonga kuze kufike ku-80% emithini kadokotela esebenzisa ikhadi lokonga i-SingleCare. Abasebenzisi be-SingleCare bangasesha i-Adderall noma i-generic yayo ku-singlecare.com futhi bakhombise isigqebhezana kusokhemisi lapho begcwalisa imishanguzo yabo ekhemisi elibambe iqhaza njengeCVS Pharmacy, iWalmart, noma iWalgreens.
OKUSHIWO: Ngingalisebenzisa kuphi ikhadi lami le-SingleCare?
3. Faka isicelo ohlelweni losizo lweziguli
Izinhlelo zosizo lweziguli zisiza iziguli ezifanelekile ukukhokhela imiyalo yazo ngezinga elehlisiwe noma mahhala. Isisetshenziswa esisodwa sokuthola uhlelo oluhle kakhulu losizo lweziguli yilokhu Ithuluzi Lokusiza Ngezokwelapha (MAT). Idalwe yi-Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), leli thuluzi lithola izinhlelo zosizo lweziguli ezincike emithini edingwa yisiguli kanye nemininingwane yazo (njengezimo zomshuwalense nemali engenayo). Ngokungafani namakhadi esaphulelo asetshenziswa njengeSingleCare, izinhlelo zosizo lweziguli zinezidingo zokufaneleka, ngakho-ke iziguli kufanele zifake imininingwane yomuntu ukuthola ukuthi ziyafaneleka yini ukuthola usizo lwezezimali.
4. Shintsha imithi
Ekugcineni, iziguli zihlala zikhuluma nomhlinzeki wazo wezokunakekelwa kwempilo mayelana nezinye izindlela zokwelapha zazo I-ADHD noma i-narcolepsy . Eminye imishanguzo ye-ADHD ingatholakala futhi ilungele impilo yayo kangcono futhi isikhwama sabo semali.
Isikhathi se-Flu 2020: Kungani ukudutshulwa komkhuhlane kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili
IVistaril vs. Xanax: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
lisebenza kahle kanjani uhlelo b iphilisi
ungaphuza utshwala ngenkathi uthatha i-zithromax
yimuphi umuthi wokukhwehlela olungele i-bronchitis
Ngingasebenzisa i-diflucan ne-monistat 1 ngasikhathi sinye
uyini umehluko phakathi kwe-estrace nokhilimu wangaphambi kokufakwa ukhilimu
nini ukuthatha usuku lwezempilo yengqondo